Beauty Matching အင်ဂျင် - အွန်လိုင်းအလှအပရောင်းအားကိုတွန်းအားပေးသည့်ကိုယ်ပိုင် AI အကြံပြုချက်များ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 27, 2020 တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 27, 2020 Douglas Karr
COVID-19 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များနှင့်စီးပွားရေးနှင့်အထူးသဖြင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်လမ်းပေါ်ရှိစတိုးဆိုင်အမြောက်အမြားပိတ်ဆို့ခြင်းအပေါ်မည်သည့် Apocalyptic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သူမျှသဘောပေါက်နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်စားသုံးသူများအားလက်လီရောင်းချမှု၏အနာဂတ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသည်။
အလှအပအင်ဂျင်နှင့်လိုက်ဖက်သည်™ (BME) သည်အလှအပအတွက်လက်လီရောင်းချသူများ၊ e-tailers၊ စူပါမားကက်၊ ဆံပင်ညှပ်သမားများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ BME သည်ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသောအဖြူရောင်တံဆိပ်တပ်ထားသော AI-based ကိုယ်ပိုင်အင်ဂျင်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များပိုမိုဝယ်ယူနိုင်သောထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအကြံပေးနိုင်ခြင်းအပြင် BME သည်ဖောက်သည်များအွန်လိုင်းမှသွားသောကုန်ပစ္စည်းများမှသည်ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာများအထိအချက်များအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးသည်။
တစ်နည်းပညာလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်, ဒီတည်ထောင်သူမဟုတ်ပါဘူး Nidhima Kohli'' ပထမဦးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြေရှင်းချက့်။ Nidhima ကိုလည်း၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏အလှတရားနှင့်ကိုက်ညီသည်™ (MBM) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ပထမဆုံးအလှအပထုတ်ကုန်ထောက်ခံချက်နှင့်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်း site ဖြစ်လာသည်။ ထုတ်ကုန် 400,000 ကျော်.
MBM ဖောက်သည်အားလုံးကိုယ့်တဦးတည်းက်ဘ်ဆိုက်ကနေသူတို့ကိုစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခွင့်ပြု, Harrod ကုန်တိုက်, Harvey Nichols, Liberty, မျှော် Fantastic, Clarins, Bobbi Brown နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်အကောင်းဆုံးအလှအပလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ MBM ကနေသင်ယူဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Kohli, ဒေတာ၏ငါးနှစ်ယူစားသုံးသူစျေးဝယ်အလေ့အထများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် B2B ရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အသိအမြင်နှင့်အမူအကျင့်ရေးကိရိယာများပေးကမ်းရည်ရွယ်သောသူမ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်မော်ဒယ် BME ကသူတို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
Beauty Matching Engine သည်သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်နှစ် ဦး စလုံးတက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်သည် virtual လက်ထောက် ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့၏ Online အသားအရေအမျိုးအစား, အသားအရေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, ဆံပင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ရနံ့ဦးစားပေးအကြောင်းကိုလက်လှမ်းအပြန်အလှန်အဖြေရှာတဲ့စတိုင်မေးခွန်းများ။
ဒီ data BME ချက်ချင်းလက်ျာထုတ်ကုန်အကြံပြုနိုင်ရန်အတွက် AI အများနှင့်ဒေတာများအသုံးချခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအစဝယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့် browsing အသုံးပြုပုံ့မှုသည်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Real-time စီးပွားဖြစ် အချစ်ရေး ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းမှဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအကြံပြုချက်များအတွက် touchpoint တစ်ခုစီ၌သီးခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့်အလှအပသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေသည်။
BME နှင့်အတူ, စားသုံးသူအတှေ့အကွုံနဲ့တူ In-store ကိုအရောင်းလက်ထောက်အွန်လိုင်းနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ရာမှတစ်ဦးဦးတည်း-on-one get ။ စတိုးဆိုင်များယခုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်နှင့်အမျှထိရောက်သော omnichannel နည်းဗျူဟာကိုဖန်တီးရန် BME ကိုလည်း store-touchpads အတွင်းသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် ကိုယ်ပိုင်နှင့်အကြံပြုချက်များ ၎င်းသည်လက်လီအရောင်းဆိုင်များကိုတည်ဆောက်စရာမလိုဘဲအတတ်နိုင်ဆုံးဉာဏ်စွမ်းရှိစေသည်
ထို့အပြင်လက်လီအရောင်းအ ၀ ယ်ပြောင်းလဲခြင်းကို COVID အသစ်ကိုကမ္ဘာသစ်အသစ်မှ ဦး ဆောင်သောအခါယခုလက်ရှိ၌ပိုမိုများပြားလာသည်။ လက်လီရောင်းဝယ်မှုတွင် BME ပလက်ဖောင်းကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာယနေ့စီးပွားရေး၏မတည်ငြိမ်မှုတွင်သူတို့၏စီးပွားရေးရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုပိုမိုလိုအပ်လာသည်။ ရာသီဥတု။
အလှတရားတိကျတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနှင့်လည်း5နှစ်ပြိုင်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူ AI အပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်, BME စားသုံးသူအချက်အလက်စာရင်းများအတွက်အတွင်းမသိမသာကွဲပြားပုံစံများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဒိုင်းနမစ်စက်သင်ယူမှု algorithms သက်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် BME သည်အသက်၊ အသားအရေနှင့် ၀ ယ်မှုပုံစံအားဖြင့်နှစ်သက်သောအလှအပထုတ်ကုန်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ပိုမိုစားသုံးသူအွန်လိုင်းဆိုင်က, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ tool ကိုလေ့လာသင်ယူအလိုအလျောက် Optimizer သွားရောက်ကြည့်ရှု။
အင်ဂျင်သည်ဖောက်သည်ရွေးချယ်မှုကိုကျဉ်းမြောင်းစေပြီး၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်သည်ဝယ်ယူရန်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ရောင်းအားတိုးလာမည်ကိုခန့်မှန်းသည်။ နှင့်သစ္စာရှိမှု။ BME ကပိုဒီတော့စားသုံးသူတွေပံ့ပိုးမှုများကိုမှတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသော 360 ဒီဂရီကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုရထုတ်ကုန်အကြံပြုချက်များ, ဖြည့်စွတ်ထုတ်ကုန်, အီးမေးလ်များ, ဆင်းသက်စာမျက်နှာများ, နှင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် personalize သို ရောင်းအားပြောင်းလဲခြင်းကို ၃၀ မှ ၆၀၀% အထိပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်သည်။
BME သည်ယူကေတွင်ပြင်သစ်ဆေးဆိုင်နှင့်ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သည်။ AoV (ပျှမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုး) ၅၀% တိုးလာပြီးရောင်းအားသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းတွင် ၄၀၀% တိုးလာသည်။ BME သည်ပရီမီယံအလှကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် By Terry နှင့်အလှအပလက်လီအရောင်းဆိုင်များဒေါက်ဂလပ်များနှင့်လည်းပူးပေါင်းခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်ကဖြစ်ရပ်တခုပေါ်အခြေခံပြီး, BME ယခုအချိန်အထိ 18m အလှအပထုတ်ကုန်အကြံပြုချက်များဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဒါဟာတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုး တစ် ဦး အထင်ကြီး 50% အားဖြင့်၎င်း, တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများ တစ်ဦး incredibe 400% အထိရောင်းအားရန်။
Beauty Matching အင်ဂျင်ထူးခြားသောရောင်းရန်အဆိုပြုချက်
အွန်လိုင်း၊ အက်ပ်၊ အီးမေးလ်နှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့် BME သည်လက်လီရောင်းဝယ်မှုကိုထိရောက်သော omnichannel နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, BME ပြိုင်ဘက်အချက်အလက်များနှင့် BME ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အောင်အလှကုန်သိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့်အလှအပထောက်လှမ်းရေးဒေတာများက powered ဖြစ်ပါတယ် အလှတရားပွဲ™ ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်များအတွက်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်သော၊ ထို့အပြင်ဤပွဲများသည်စားသုံးသူများ၏အလေ့အထများကိုလေ့လာရန်အချိန်ပိုယူသောအခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူသည်မှာသူတို့လက်မှတ်ထိုးသည့် အချိန်မှစ၍ စားသုံးသူများ၏တကယ့်လိုအပ်ချက်များကိုအကျိုးပြုသည်။
စီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် plugin သည်ဖောက်သည်များအားအကောင်အထည်ဖော်ရန် ၁-၂ နာရီခန့်သာအချိန်ယူရသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယနေ့အကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိပေ။ ၎င်းသည် AI နှင့်အလိုအလျောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါင်းစပ်ထားသော platform တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည် အချိန်ကုန်လက်စွဲစာအုပ်စနစ်များကို။
သည်အခြားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် စျေးကွက်ရှိအလှပြုပြင်ခြင်းပလက်ဖောင်းများ၊ BME သည်ဉာဏ်စမ်းပဟေonိများအပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုသာပေးရုံမကစားသုံးသူအပြုအမူကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးဆံပင်မှအမွှေးနံ့သာများအထိအရေပြား၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လက်သည်းများအထိအလှအပအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် touchpoint ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကိုယ်ကသာတိုင်းအလှတရားအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုကနေဆံပင်မှအမျိုးအစားနှင့်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်မှကိုက်ညီကြောင်းမဟုတ်ရုံတစျခုအမျိုးအစားများအတွက်အလုပ်သောညာဘက်ထုတ်ကုန်များနှင့်အရောင်များကိုအကြံပြုတဲ့ထူးခြားတဲ့အလှတရားတိကျတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အချက်အလက်များ၏5နှစ်ခြင်းဖြင့် powered ကြောင့်လည်း, နေ့ 1 မှတစ်ဦးသည်၎င်း၏ client များအတွက်မြင့်မားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
လောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့အလှတရားသတ်သတ်မှတ်မှတ်မဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့တစ်တွေအလှတရားတိကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. တူသောရောင်းအား၌တူညီသော 360% မြင့်မားမပေးပါဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့မှ 400-3 လအတွင်းယူနိုင်အောင်, အလှအပအတှကျ optimized မရှိကြသည့်များစွာသော6ဒီဂရီ personalization ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ် တကယ်တစ် ဦး မြှင့်တင်ရေးပြသအတော်လေးလက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်ကြသည်။
Beauty Matching Engine သည်သုံးစွဲသူများ၏စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကို touchpoint တိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်တီထွင်ဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုရှိသည်။ သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ Beauty Matches ™ကို COVID လောကတွင်သို့မဟုတ် VVV အလှပြင်ဆိုင်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်နှင့်အလှအပလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုယူဆောင်လာခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်မျှော်လင့်သည်။
Camille Kroely, ပွင့်လင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု & ဒစ်ဂျစ်တယ်န်ဆောင်မှုများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဌာနမှူး
Tသူသည်အနာဂတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်လှပသောလက်လီအရောင်းဆိုင်၏အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ .is Beauty Matching Engine ™။
Tags: aiလှပမှုအလှတရားကိုက်ညီခြင်းအင်ဂျင်ကိုအချစ်ရေးBobbi အညိုရောင်ClarinsHarrod ကုန်တိုက်Harvey Nicholsလွတ်လပ်ခြင်းမျှော် Fantasticအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များအကြံပြုချက်များ